China Quartz Tube Emeputa na Supplier | Dinglong
Anyị quartz tube na-egosipụta ịdị ọcha dị elu, nkwụsị corrosion, na nkwụsi ike dị elu na arụmọrụ. Anyị na-enye ụdị dị iche iche na akụkụ dị iche iche nke quartz tubes na ndị ọkachamara anyị ga-arụ ọrụ iji bulie ngwa gị.
Ngwa: Ọkụ, Fiber Optics, Semiconductor, Solar
Anyị nwere ọtụtụ ngwaahịa quartz tubes maka ngwa ọkụ ma nwee ike mezuo ihe ị chọrọ. Anyị na ngwaahịa nwere ike etinyere na omenala ọkụ, ụgbọala ọkụ, pụrụ iche ọkụ, germicidal na kpo oku ubi.
A na-eji eriri anya dị ka ụzọ isi nyefe ọkụ n'etiti nsọtụ abụọ nke eriri ahụ ma chọta ọtụtụ ojiji na njem fiber-optic. Anyị bụ ndị mpako na-akụkụ nke a mmepe na-agba mbọ iji na-eme ọhụrụ ngwaahịa na echiche na-ezute ọtụtụ nsogbu. Ngwaahịa anyị na-agụnye quartz cylinder dị ọcha dị elu, mkpanaka aka, mgbatị, eriri mkpuchi maka eriri anya.
Quartz iko na-arụ ọrụ dị mkpa na ngwa semiconductor. Semiconductor ọkwa quartz tubes nwere nnukwu ịdị ọcha, obere hydroxyl na nguzogide okpomọkụ dị elu. Anyị na-enye dịgasị iche iche nke semiconductor quartz ọkwa akpa.
Ngwunye quartz anyị nke anyanwụ na-egosipụta ịdị ọcha dị elu na obere hydroxyl. A na-ejikarị ya dị ka ihe bụ isi maka quartz components nke mgbasa na usoro PE na nhazi nke anyanwụ.
Nke gara aga: Quartz ntụ ntụ
Osote: Quartz Crucible
Elu okpomọkụ Quartz tube
Quartz Ọkụ tube
Ndị na-enye Quartz Tube